ko htike's prosaic collection: ......ဘယ်သူကပြောလဲ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်သေးဘူးဆိုတာ.....
......ဘယ်သူကပြောလဲ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်သေးဘူးဆိုတာ.....
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ တစ်ညလုံးတောင်းဆိုပွဲလုပ်မယ် ဘယ်သူမှအိမ်မပြန်ဘူး သတင်းအား အတည်ပြုပါတယ်။
သံဃာတွေရော၊ လူတွေရော သိန်းဂဏန်းရှိမဲ့လူအုပ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာအေးဘုရားကိုကျော်သွားပြီ၊ မြို့ထံအထိဆက်ချီတက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ တစ်ညလုံးတောင်းဆိုပွဲလုပ်မယ် ဘယ်သူမှအိမ်မပြန်ဘူးလို့ ကြားသိရပါတယ်။ သတင်း အတည် မပြုရသေးပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတတ်တဲ့ လူသားလှိုင်းလုံးတွေကို မြန်မာလူမျိုးတွေ မော်ကွန်းထိုးလိုက်ပါပြီ။
မိုးကုတ်မှာသံဃာ 5000 ကျော်နဲ့ လူထု အင်အား 200000 ကျော်ခန့်ဆန္ဒပြနေပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 10:10
25 September 2007 at 01:05
The people of New Caledonia are following your combat and support the people of Burma!
With everyone on the streets your government will be overthrown!
26 September 2007 at 10:19
2 April 2009 at 04:34
9 April 2009 at 02:05
13 April 2009 at 17:09